निक्षेप बढ्न थालेपछि सीडी रेसियो घट्यो, अब सहज होला त तरलता अवस्था ?
काठमाडौं : पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा उल्लेख्य मात्रामा निक्षेप थपिएको छ । विशेषत पुस लागे यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढेको देखिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार पुसयता वाणिज्य बैंकहरुमा ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यसअवधिमा २४ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको संघको तथ्यांकमा छ । पुस १६ गतदेखि २३ गतेसम्मको एक साताको अवधिमै वाणिज्य बैंकहरुमा ५८ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
संघको तथ्यांकअनुसार पुस ९ गतेसम्म कुल ४२ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकोमा पुस १६ गते १४ अर्ब थपिएर ४२ खर्ब ४९ अर्ब पुग्यो । यसैगरी, पुस २३ गतेसम्म ५८ अर्ब थपिएपछि कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । यता, पछिल्लो एक सातामा कर्जा भने जम्मा ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र विस्तार भएको छ । पुस २३ गतेसम्म आउँदा कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।
कर्जाको तुलनामा निक्षेपमा उल्लेख्य सुधार देखिँदा बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा पनि सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस २५ गतेसम्म २७ वाणिज्य बैंकको औसत सीडी रेसियो ८९.३७% मा झरेको छ । पुस १९ गतेसम्म बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९०.४५% थियो ।
यसरी हेर्दा बैंकहरुको सीडी रेसियो क्रमिक रुपमा घट्दै अहिले केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमा भन्दा तल आएको हो । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार सोमबार पुस २७ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । पछिल्लो समय तरलता अवस्थामा केही सहज भएको उनले बताए । योसँगै बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि घट्दै गएको हो ।
कसरी बढ्यो निक्षेप ?
पछिल्लो समय ह्वातै सीडी रेसियोमा सुधार र निक्षेप बढ्नुका प्रमुख कारणहरुमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८०% सम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र थप पुनर्कर्जा स्वीकृति रहेका छन् । बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको बजेटको ५०% मात्रै निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्दै आएकामा पुस ५ गते अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ८०% पुर्याइएको थियो । त्यस्तै, एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा केही कमी आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
जसका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थप सहज भएको हो । आयात र डलर सटहीमा गरिएको कडाईंले पनि निक्षेपमा वृद्धि भएको हो । पुस अन्तिम साता सुरु भइरहँदा पुँजीगत खर्चमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । यता, केन्द्रीय बैंकले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई डलरमा निक्षेप खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले तरलतामा क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तरलता समस्या समाधान भएकै हो त ?
निक्षेप वृद्धि भइरहँदा अगामी दिनमा तरलता अवस्था थप सहज हुने आंकलन गरिएको छ । तत्कालै तरलतामा सहज नभए पनि विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै जाने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । दोस्रो त्रैमासपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण पनि उठाउने भएकाले बजारबाट पैसा सरकारी ढुकुटीमा पनि जाने उनले बताए । जसका कारण माघ पहिलो सातासम्म भने तरलतामा केही दबाब पर्ने भट्टराईको भनाई छ ।
तथापि, स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८०% सम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने र थप पुनर्कर्जा स्वीकृतिले यसमा केही सहज बनाउने उनको अनुमान छ । आगामी दिनमा सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा तरलतामा सहज हुने उनको भनाई छ । यस्तै, अब विस्तारै निर्वाचनको माहोल बन्दै जानेछ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकिने भनेको छ । निर्वाचनको बेला तरलता सहज हुनेछ ।
यता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि माघ लागेसँगै तरलतामा सहज हुने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दो कोशिस गरिरहेको बताउँदै अगामी दिनमा तरलतामा सहज हुने आश्वासन दिंदै आएका छन् ।